Maalinta: Juun 18, 2018
RayHaber Maxaa loo aasaasay? : Ilaa 2023 ee Turkey, hordhaca ah ee tareenada-xawaaraha sare ee 29, si ay u gaaraan dherer total of 25 kun oo kilomitir oo khadadka iyo labada khadadka iyo tareenada cusub oo 250 bilyan [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalaada Adana waxay diyaarisay 19 khariidadood oo kala duwan si ay u dhiiri galiso adeegsiga gaadiidka dadweynaha ee gaadiidka magaalada waxaana lagu sudhay meelaha istaago wadooyinka halbowlaha ah. Dawlada Hoose ee Magaalada Adana, Gaadiidka Dadweynaha ee Gaadiidka Magaalada [More ...]
Gaadiidka Taraafikada ee Led Display
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa inay tusaale ka dhigto nidaamyadeeda gadiidka caqliga leh ee caasimada. Gawaarida taraafikada ee caasimada, bandhigyada LED-ka waxaa loo yaqaan d luqada wadooyinka; laga bilaabo macluumaadka wadada illaa macluumaadka jihada, waqtiga gaadiidka [More ...]
Miyuu jidka tareenka ee Bursa-Gemlik lagu darayaa barnaamijka sanadka soo socda?
Raiisel wasaare kuxigeenka Hakan Çavuşoğlu ayaa ku dhawaaqay in la wareejiyay xil wareejinta, waxaana madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan uu ku dhawaaqay in barnaamijka lagu soo dari doono barnaamijka. … 24-kilomitir oo dhererkiisu yahay Bursa-Gemlik Railway Railway waxay kordhisay rajooyinkeeda ah in lagu daro barnaamijka sanadka soo socda. [More ...]
Istuudiyaha Tareenka Baasifigga iyo Xarumaha Tareenka Gawaarida Isbeddelaya?
Mashruuca, ük Wadada laamiga ah ee ka gudbeysa Wadada Mudanya waxaa loo arkaa Bursa Train ee tareenka xawaaraha sare ku yaal ee Balat. Tareen xamuul ayaa sidoo kale la qorsheeyay dhulka u dhow creek. Si kastaba ha noqotee, Dowladda Hoose ee Degmooyinka Bel [More ...]
Istaatistikada Istaatistikada Istaatistikada Istaatistik
Sida ku xusan bogga Twitter-ka, Yenikapı ee Metro Istanbul - Vezneciler saldhigyadu waxay ku joogsadeen 06: 00 subaxa hore, laakiin metroogu wuxuu ku noqday caadi caadi ahaan qiyaastii 07.30. Adeegga Metro ee magaalada Istanbul waxaa loo joojiyay cilad farsamo awgeed. Yenikapı iyo [More ...]
Dawladdu waxay bilawday dib u soo noolaynta waaxda muhiimka ah ee 8. Jihadaan, 43 wuxuu taageeri doonaa badeecada xasaasiga ah. Qeybta 8 waxay furi doontaa albaabada ganacsiga ee 3 milyan Dowladdu waxay yareynaysaa gacanta dhammaan qeybaha [More ...]
Transport, arrimaha badda iyo Wasiirka Isgaarsiinta Ahmet Arslan, dhibaatooyin dhinaca ammaanka ah ay sabab u tahay 2015 sano laga saaray markii Turkey (Van) - waqti Iran (Tabriz) 18 tareen rakaab ay ayaa ku dhawaaqday in ay bilaabi doonto in July. Maanta Van [More ...]
Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya waxay soo bandhigtay codsi cusub muwaadiniinta. Xilliga ku-dallacaadda USB ayaa ka bilaabmay basaska degmada oo bixiya adeegyada gaadiidka dadweynaha. Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya [More ...]
Qeexitaanka Kocaoğlu'ndan Bergamalılara, IZBAN
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu ayaa khudbadiisa ku sheegay intii uu booqanayay Bergama, kordhinta khadka IZBAN laga bilaabo Aliaga ilaa Bergama. Isagoo dhaleeceynaya siyaasadaha soo dejinta ee beeraha, ayuu Madaxweynaha Aziz Kocaoğlu yiri: [More ...]
Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, 29. Gegada dayuuradaha, 3 wuxuu shaaca ka qaaday in ilaa sanadka, 2025 ay shaqaaleysiin doonto kumanaan kun oo qof. Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, oo ku sugan TRT Haber [More ...]
1 qof ayaa la diley halka dadka 3 ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay koonfurta Kazakhstan. Wadada Tareenka ee Kazakhstan waxay ku taalaa inta u dhaxaysa magaalooyinka Astana iyo Almaty ee gobolka Jambyl ee Kazakhstan. [More ...]
TAMBKA injineeriyada farsamada ee Trabzon Gudoomiyaha Laanta Saban Bülbül Erzincan-Trabzon Railway ee loo raaco Trabzon waa in horay loo sii qaddariyo, ayuu yidhi. Sahaminta Raadinta Erzincan-Trabzon, Naqshadeynta, Injineerka iyo Adeegyada La-Talinta [More ...]